दाँत पहेँलो छ ? अपनाउनुहाेस् यी घरेलु उपायहरु .....
काठमाडौं– दाँत पहेँलो हुनु अहिलेको मूख्य समस्या हो । हिजोआज धेरैलाई दाँतको समस्या रहेको छ । पराग, सुर्ती खाँदा पनि दाँत पहेँलो हुन्छ । सहि तरिकाले दाँतको हेरचाह नगर्दा दाँत पहेँलो हुन्छ । आफ्नो अनुहारको सुन्दरतामा दाग आउँछ । त्यतिमात्र होइन धेरैको आत्मा विश्वाश पनि घटेको देखिएको छ । दाँतको पहेँलोपन हटाउने ६ घरेलु उपायहरु यसप्रकार छन् -
१. नुन र तेल
२. तुलसीको पात
४. नीमको पात